Maniry herintaona Netflix maimaim-poana? Ny hosoka fahafolo ambin'ny folo latsaka amin'ny | Vaovao momba ny gadget
Maniry herintaona Netflix maimaim-poana? Ny hosoka fahafolo ambin'ny folo latsaka amin'ny tsirairay
Betsaka ny kinova an'ity WhatsApp ity izay tonga tamiko, ary eritreretiko fa saika ny mpamaky rehetra eto daholo. Ny tolotra herintaona avy amin'ny Netflix dia tsy isalasalana fa mahomby, ambany hatrany amin'ny 100 euro. Na izany aza, ny zavatra voalohany tokony hataon'ireo mpampiasa "millennial" na manam-pahalalana amin'ny tambajotra dia ny fisalasalana amin'ireo karazana tolotra ireo izay tsy mitady afa-tsy ny hihazona ny angon-drakitrao sy ny teny miafinao mba hanolorana azy ireo ho an'ny mpanome ambony indrindra. Amin'izay mba, ilay antsoina hoe "hoax Netflix maimaim-poana amin'ny taona" dia niparitaka toy ny afo mandoro ary efa sarotra ny mijanona, efa nianjera taminao ihany koa ve?
Na ny CFSE aza dia efa nanako, namporisika antsika tsy hanaikitra an'io karazana hosoka io, ny Twitter an'ny National Police Corps (@policia) dia nampitandrina antsika fa amin'ny alàlan'ny fahazoana ilay rohy fotsiny no nametrahantsika loza, tsy ny angon-drakitra ihany, fa ny fitaovantsika koa, indrindra raha nataontsika tamin'ny finday avo lenta izay ny rafi-piasan'ny Android dia noho io karazana aretina io.
Ny fomba tsy hampahasosotra anay dia ny nomeraon-telefaona premium voalohany, raha vao lazainay amin'ny tranonkala ny nomeraon-telefaonantsika, aiza no heverina fa handefasan'izy ireo ny kaody Netflix hankafizantsika azy mandritra ny herintaona, manomboka mampihetsika ny famandrihana tsy misy fahalalana izy ireo, izay mety hihemotra be amin'ny faktioran-telefaonanao. Izany rehetra izany rehefa avy nanaparitaka ny hafatra hatramin'ny fifandraisana folo hafa dia midika izany fa raha nahazo ny hafatra ianao dia mety efa latsaka tao anaty fandrika ny mpandefa azy.
Izahay avy amin'ny Actualidad Gadget dia mamporisika anao izahay hifandray amin'ireo mpampiasa rehetra izay heverinao fa malemy alohan'ity karazana fisolokiana ity, ary mampitandrina azy ireo amin'ny fisolokiana toy izany, ny famoahana tranonkala momba an'ity raharaha ity toa ny anay na ny tranonkalan'ny teknolojia hafa an'ny orinasa iray dia hanome azy ireo hahita antony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Maniry herintaona Netflix maimaim-poana? Ny hosoka fahafolo ambin'ny folo latsaka amin'ny tsirairay
Amin'ny 23 Mey dia mety hahita ilay Surface Pro 5 vaovao isika
Invoke, ilay mpandahateny Microsoft ary Harman Kardon miaraka amin'i Cortana mpanampy